VEHIVAVY MALAGASY: MITSANGANA! - Madagascar va très mal
VEHIVAVY MALAGASY: MITSANGANA!
Publié le 4 avril 2009 par Ny marina tsy maty
Malagasy hendry dit :
3 avril 2009 à 16 h 12 min
Aleo anaovanay viavy azy :
ANTSO ATAO AMINAREO TAFIKA ARON’NY VOZONA : MIARAMILA , ZANDARY, POLISY
Izahay vehivavy sivily malagasy dia nanapa-kevitra ny handray ny andraikitray @ maha-renim-pianakaviana anay satria tsy nahavita ny asa maha-tafika mpiaro ny vahoaka anareo ianareo ary porofon’izany :
- Notazaninareo fotsiny izahay vehivavy rehefa nanao herisetra taminay ireo mpandroba ary navelanareo ho faty tamin’ny famonoana natao azy ny vahoaka..
- Notampenanareo ny sofinareo rehefa manoloana ny antso nataon’ireo olona izay norobaina sy nampihorohoroina.
- Nojerenareo maso fotsiny ny fandrobana sy ny fandoroana natao t@ ireo trano fivarotana, ny TVM, ny toeram-piasan’ny praiministra, ireo fitaovana sy fananam-pirenena maro ary ny fangalarana ny vola tao @ banky foiben’i Madagasikara.
- Notazaninareo fotsiny ireo mpanongam-panjakana ary navelanareo handrombaka an-keriny ireo andrim-panjakana
- Vitanareo ny mamela ity firenena ity ao antin’ny haizin’ny fandikan-dalàna sy ny fampanjakana ny halatra sy herisetra
Nihaino anareo zahay satria efa nanao fanambarana ianareo ary nilaza fa :
- Tsy afaka ny hifamono ianareo samy miaramila. Vokatr’izany dia ny sivily no nanjary nifandona.
- Matahotra ny ainareo sy ny ain’ny havanareo ianareo ! Iza izany no hiaro anay ? Nokaramain’ny vahoaka anie ianareo e !
- Milaza ianareo fa tsy manao politika, kanefa ny tsy fankatoavana nasehonareo ireo manam-boninahitra mpitondra anareo dia efa midika ho fiandaniana sahady ary mpiray tsikombakomba tsy mivantana ianareo satria mijery maso fotsiny ireo fandrobana, herisetra, fanolanana, fakana an-keriny, fampihorohoroana ary fanonganam-panjakana.
Mbola misy antony hafa ve manakana anareo tsy handray handraikitra na dia ho fiarovana ny voninahitrareo ihany aza? Dia sanatria ve misy kolikoly manakana anareo tsy handray andraikitra ?
- Raha mijanona amin’izao ianareo dia raisinay ho mpiray tsikombakomba tamin’ny fanonganam-panjakana, fandrobana, vono olona, herisetra samihafa hatramin’ny 26 Janoary 2009 no makaty.
- Midika izany fa ireo jiolahy sy mpikomy mpanongam-panjakana no navelanareo hitantanana ny firenena .
- Hadinonareo ny tombotsoa ambonin’ny tanindrazana ary nataonareo sorona izany ho takalon’ny tombotsoanareo manokana.
- Raha izany no izy dia hianareo no tafika osa sy tsy misy ilana azy indrindra maneran-tany : Ireo fikambanana iraisam-pirenena sy ny olom-pirenena malagasy rehetra dia manahy mafy dia mafy ny amin’ireo miaramilantsika izay tsy manome tombam-bidiny intsony ny ambaratongam-pahefana no sady tsy sahy mandray ny andraikiny na dia hamohizany ny lazany sy ny voninahiny manontolo aza izany.
- Menatra izahay kanefa tokony ho menatra lavitra noho izahay ianareo.
Fantaro anefa fa ny vokatr’izao ‘krizy’ izao dia ireto avy :
- Tsy fisian’ny fandriam-pahalemana intsony eo anivon’ny fiaraha-monina : marobe ireo tranon’olon-tsotra no lasa sorona vokatry ny fanafihana mitam-piadiana ataon’ny olon-dratsy isan’andro sy isak’alina.
- Ary tsy ho ela akory dia hisedra herisetra ireo zanakay vavikely noho ny tsikombakomba ataonareo tafika ihany.
- Tafiditra amin’ny fatiantoka lalina ny firenena Malagasy: nozaraina tamin’ireo mpikomy mpanongam-panjakana ao ny volam-bahoaka.
- Filentehan’ ny malagasy amin’ny fahantrana lalina
- Fanamafisan’ny fampanjakana kolikoly.
- Tsy azo antoka intsony ny hisian’ny fitondram-panjakana mari-toerana satria manomboka izao na iza na iza olona tsy ampy saina manana vola hanakaramana ny tafika mba ho ataony fitaovana haka ny fahefana an-keriny dia afaka manao izany izy.
Noho izany, raha toa ka mbola tsy mandray ny andraikitrareo avy hatrany hianareo tandroka natao ho aron’ny vozona, izahay vehivavy olom-pirenena tsotra eto Madagasikara dia :
- Tsy afaka ny hangina intsony raha mbola manao izay hahafa-boninahitra anareo ianareo no sady manao izay hampi-doza ny fiainanay.
- Ho tandindomin-doza hatrany hatrany ny fiainanay amin’ny fiarovana ny ara-dalàna ary tsy maintsy hihatra aminay hatrany ireo fampihorohoroana sy loza samihafa aterak’izany.
- Ho takianay sy ho tohananay ny fampidirana ireo tafika avy any ivelany mba hanatanteraka ny asa izay tokony ho nataonareo: hiarovana ireo andrim-panjakana ara-dalàna, anay vehivavy sy ireo zanakay, ny vahoaka sy ny fananany ary ny tena demokrasia marina.
Tsy mba takiana ny voninahitra sy ny haja fa omena maimaimpoana izay mendrika azy.
Asehoy àry fa mendrika izany ianareo tafika aron’ny vozona itokisan’ny Malagasy rehetra!
« AGENDA PARIS CE WEEK... Madagascar: 102° département... »
Alain 07/04/2009 14:45
Mihetseha ry vehivavy!
Mahafinaritra io article io
Ity koa misy namany:
gasi 06/04/2009 16:09
misaotra Ny marina tsy maty. Miombon-kevitra tanteraka aminao aho. Laharam-pahamehana ny fanafoanana tanteraka ny tafika ary ampiako hoe ankoatry ny fanamboarana tanteraka hatreny amboalohany ihany koa ny sampana momba ny fitsarana rehetra.
Tsy maintsy dinihina mialoha fotsiny koa ny hatao ireo ex-tafika mba tsy hanjary ho lasa laharam-pahamehana indray ny ady @ dahalo!
gasi 04/04/2009 15:22
Sendra naharaka ny fitantarana mivantana ny fizotran'ny fihaonan'ny firen-dehibe mpikambana ao @ OTAN aho androany, dia nahare ny fanazavan'ny manamboninahitra iray ny fandaharana ny fipetrahan'ireo mpivory: ny filoham-pirenena rehetra eo aloha, manodidina ny latabatra, ny ministry ny fiarovana eo andamosiny ary manaraka azy ny lehiben'ny etamazaoron'ny tsirairay avy. Feno rehareha sy toky tanteraka izy ireo manoloana ny tafik'izy ireo tsirairay avy... ny tena nampihetsi-po dia ilay hoe fianianana nataona manamboninahitra iray, nilaza fa tsy hampidina ny fitaovam-piadiany raha mbola mitsangana ireo saina telo...
Dia milatsa-dranomaso fotsiny misaina ny toe-javatra mifanohitra amin'izany rehetra izany any Madagasikara...
Fa dia ny fahantrana tokoa ve no nandevenana ihany koa ny atao hoe hasina amin'ny mahaolombelona, tsy hanana fanajàna n'inon'inona intsony mihitsy?
Ny marina tsy maty 04/04/2009 20:22
Ny miaramilantssika ireo no zaza vokatry ny fitondran-dRatsiraka nandritry ny telopolo taona: vatana tsy misy inoninona ao an-dohany fa ny hidirana miaramila dia ny hihinampotsiny sy handray
vola fotsiny ho takalon'ny tanin'andro isan'andro isan'andro. Jereo na ny fijorony na ny fitafiny na ny fiteniny dia tsy misy hanajana azy na kely aza.
Ahoana moa no hanajan'ny fitondrana anao miaramila nefa ianao aza manao fitondran-tena tsy mendrika? tsy efa hiangarana manokana foana ve ny miaramila eo anatrehan'ny mpiasampanjakana rehetra?
Amiko, dia tsy misy antony ilàna ireny vondron'olona ireny eto amin'ny nosintsika! tokony foanana ny ACMIL Antsirabe satria mamolavola jiolahy sisa no ataony ary manao tsinontsinona ny